ANDRO MIDITRA SY VOLA NIVOAKA — Tsara Soratra
ANDRO MIDITRA SY VOLA NIVOAKA
by Hemerson Andrianetrazafy
Androany no nahatsapako fa hay zavozavom-pisiana ho an'ny manodidina sy izay tany lalovako rehetra ity tenako !!!
Sahabohabo tamin'ny sivy maraina teo, iny aho hiazo ny Tahala Rarihasina iny ka nandeha milamina manamorona ny kianja malalaka eo afovoan'Analakely, nisy fiara nikodiadia maika hamonjy fiantsonana. Tsy nasiany sira ny fisiako fa dia nodominy soamantsara avy ao aoriana ny fitombenako. Izy moa ao ivohoko ka tsy hitako ny niaviany. Tsy nanam-potoana ny ho taitra akory aho fa tonga dia dona be sy ronjona tsy misy toa izany no nosedraiko. Tsapako mafy ny fiantraikan'ilay fiaro-dona taty amin'ny nofo malemiko.
Nikipily aho fa tsy nianjera ary avy hatrany dia nojereko tamin'ny masony ilay mpamily mba hizahako ny fientanam-panahiny amin'ilay hasompàrana nampihariny tamin'ny ampaham-batako. Gaga aho fa tsy taitra tsy rototra akory izy. Hitako ary hoe nihanihany nampivonto-fo. Tsy misy azafady io ry 'Ilahy fa izaho indray no novandravandran'ilay vondraka tsy niala tamin'ny lava-dreniny teo.
Maika be moa aho satria efa tara ny fampianarako. Nojereko koa ny tenako tsy nisy ratra ivelany ary mbola afaka nijidina tsara dia iny aho no lasa...Ompa sy ozona no navelako hifanatrika taminy teo !
Tsy ho tantaraiko anao ilay nanjo ahy faharoa manaraka, ora vitsivitsy avy eo. Teo ihany koa no nahitako fa hay tsy dia misy sira ho an'ireo olona noheveriko hanànana rohy manankasina ny tenako ! (...) Tsy olana, izaho koa moa tsy nitady ny ho hasinina na ho lolohavina an-tampon'ny loha !... Fantatro ny efa vitako sy ny hery nolaniako tamin'izay natrehiko rehetra dia ampy ahy izay.
Hariva ihany ny andro. Andeha hody ary aho fa efa nandondona ny oram-pahavaratra maniry hidongy sehatra. Dia iny aho nizotra tsy rototra, toy ny fanaoko, nanjoy ny toeram-pijanonan'ny fiara fitaterana teny Tsimbazaza. Toy ny raim-pianakaviana manara-penitra dia nanararaotra ny mbola tsy fisian'ny fiara aho, ka nanao kibo an-tsena, nanohana kafé sy mofo gasy teo amin'ny sisiny teo.
Vita iny dia namonjy ny moron-dalana aho. Nifanojo tamin'ny fandalovan'ny fiara fitaterana anefa aho tamin'io. Tampoka teo olona tsy latsaky ny telopolo no indray nirohotra nanenjika ilay fiara mbola tsy nijanona tanteraka. Loza fa teo amin'ny lalany aho nefa tsy nasiany sira fa dia nodomin'izy rehetra tsy nisy antra. Rehefa niongana satria voafingan'ilay vato miavo napetraky ny Fivondronana, dia noseny soaman-tsara ! Tsaroako eto fa nisy tamin'izy ireo, tovovavy herotrerony, tsaratsara tsanganana (mahafaty (faty) tokoa amin'ny angovo sy ny lanja nakapony mafy hiantraika taty amin'ny trakitraki-tratrako. Nisy ihany koa renim-pianakaviana, amin'ireny lava vavàka omban-toriteny ireny ; maro ny tovolahy vory nofo sy matanjaka ary nisy ny raim-pianakaviana efa nahazoazo taona toa ahy... Fa efa tsinidrin'ny fitia tia hody sy ny roahy fa hariva dia lasa manao toetran'omby tsy miraharaha izay ho voatosika sy ho voahitsaka. Any hiaka nivoaka ny vavako : "Tena misy teha-maina ratsy zara mihitsy eto amin'ity fiaraha-monina ity ! Fa Itena isany ve adala éééé !"
Niakatra be ny taham-pasorenako... niditra tao anatin'ilay fiara ihany aho dia iny nandeha ho any Ambanidia. Noraisin'ilay mpitaky saran-dalana ny ravin-taratasy manga misy soratra 5000 ar. Io no mba hany fananana nanaingo ny paosiko !
"Ity miala iray eo amin'ny Poste Ambanidia" hoy aho
Dia nikodia ilay fiara nitondra ireto mpandeha mihilam-body, mifanety arak'izay tratra... nandalo any Manakambahiny, nananika an'Ambanidia. Izaho mbola mitsako ny zavom-pahatezerana mikiky ahy hatrany amin'ny tsinaimaintiko.
Tonga teo amin'ny Poste Ambanidia ilay fiara dia nangata-dalana tamin'ireo nipetraka rehetra tokony ho dikaiko aho mba ahazoako hivoaka. Elaela ihany ny fotoana namonjeko ilay varavarana. Vao nandia tany anefa ny tongotra dia lasa ilay fiara. Teo vao tsaroako fa tsy nomen-dry zareo ny famerim-bolako ! Nitodika aho hanara-maso sy hiantso nefa efa dify ilay fiara : Teo aho no noraisina !
Satria moa aho handeha hody eny Ambonin'Antsahameva (Ankatso), dia iny indray nanjoy ilay lalankely manivaka any Faliarivo ka mivoaka eny Ampasanimalo. Nosavaiko ny paosiko ary vola roanjato sisa no voarambiko tao ! Valaka ny lohako, nangidy hatramin'ny rorako dia nanapa-kevitra aho fa handray fiara-fitaterana eo amin'ny "Buffard". Ilay fiandrasana manoloana ny sampanan'Antanimora. Dia nandalo ity fitaterana avy any Antanimena. Dia nidirako soamantsara. Rehefa teo anoloan'ny "Mpitsabo mikambana" dia natolotro ilay roanjato. Avy hatrany dia nizizo ilay tovolahy mpandray vola !
"Ampio ariary zato ity Razoky fa telonjato ny frais eto izao" hoy izy !
"Tsy manana an'izany aho !" hoy ny navaliko azy. Ary nampiako hoe "Roanjato foana no fiakarako eto isan'andro !"
"Miala eto izany ianao !" hoy izy
Nizizo intelo ilay zandrikely !
Tsaroako nisy afo niakatra nananika ny atidohako ary nibitsibitsika tamiko hoe : "Eo rangahy tonga dia ataovy fa izay lalany any lalany ah !" Efa handeha ho kendaiko ilay zandry ! Soa fa tsy niteny intsony izy avy eo mandra-pahatongavanay teny Ankatso !!!
Mba hafa mihitsy ity andro androany nolalovako ity ! Izay angaha no atao hoe Andro miditra !
Hemerson, androany 27 oktobra 2016
Mpanakanto maro talenta, mpampianatra sy mpikaroka eny amin'ny Oniversiten'Antananarivo, mpahay tantara i Hemerson Andrianetrazafy. Mpikambana ao amin'ny Akademia Malagasy koa izy.
tagged with sombintantara, fiarahamonina